Ukuncibilika kwe-Arctic kuyithinta kanjani iSpain? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UBenidorm ekupheleni kwekhulu leminyaka, ngokusho kukaGreenpeace.
ISpain yizwe laseYurophu elizohlupheka kakhulu emiphumeleni yokushisa komhlaba. Ukuncibilika kokubili kwe-Arctic ne-Antarctica kuzokwenza ukuthi ulwandle lukhuphuke, kuthinta nakanjani ugu lwaseMedithera.
Amazinga okushisa aphezulu azoba nomthelela omkhulu ezitshalweni, ukuze umkhiqizo wokudla ube nzima kakhulu futhi ubize kakhulu. Ngokusho Greenpeace, ISpain yizwe lapho ukuguquka kwesimo sezulu kuzoba nomthelela omkhulu.
Kuyiqiniso ukuthi i-Arctic neSpain bahlukaniswe ngamakhilomitha ayizinkulungwane eziningana, kepha lesi sifunda esisezindaweni eziphakeme siyapholisa iplanethi, ukuze lapho iqhwa lincibilika, izilwandle zizomunca ukushisa okwakuboniswa ngaphambilini ngama-ice sheet.
Ngakho, INingizimu Yurophu izoba yindawo ethinteke kakhulu ekuguqukeni kwesimo sezulu, ikhiqiza amagagasi okushisa ashubile, ukwanda kwamazinga okushisa, ubunzima bokuthola amanzi ahlanzekile, ukungena kwezinambuzane ezintsha nokwanda kwenani nobude bemililo. Ngalo mqondo, isicishamlilo sehlathi soMphakathi waseMadrid esibizwa ngeMonica San Martín Molina, sathi imililo iya ngokuya iba namandla, iyabhidliza kakhulu, kanti emizuzwini eyi-10 umlilo omncane usuphenduke umlilo omkhulu.
Ngakho-ke kubalulekile vikela i-arctic, hhayi kuphela ngenxa yalokho okungenzeka eSpain nasemhlabeni wokungakwenzi, kepha futhi ngoba kuseyindawo lapho kuhlala khona izilwane, abantu nendawo enhle kakhulu esingalahlekelwa yiyo uma siqhubeka nokuphatha iplanethi njengoba senza, singcolisa, ukugawulwa kwamahlathi, ukushiswa kwemililo nokuxhashazwa kwezinsizakusebenza zayo ngokungathi akunamkhawulo.
Sonke, ngezinga elikhulu noma elincane, singakwazi futhi kufanele senze okuthile ukugwema inhlekelele. Ekugcineni, ukushintsha kwesimo sezulu kwanamuhla kubhebhethekiswa ngabantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuncibilika kwe-Arctic kuyithinta kanjani iSpain?